ဘဝမှတ်တိုင်: ဘထ္တီအားပြည့်ရင်ချက်ပေးမဲ့ Alarm လေး။
Battery အားပြည့်ရင် အချက်ပြပေးမဲ့ Battery Full & UnPlug Alarm 1.0
7:38 PM Aungko Htet No comments
ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ battery တွေကို အားသွင်းရင် အားပြည့်တယ်မပြည့်ဘူးဆိုတာ ဒီအတိုင်းဆိုရင် မသိနိုင်ပါဘူး။ အဲဒီအတွက်battery အားသွင်းရင် နဲ့ အားပြည့်တဲ့အခါမှာအချက်ပေးတဲ့ app လေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက် ပါတယ်ဗျာ။ Andorid version 2.1 နဲ့အထက်မှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
The app alerts via sound & vibration if the battery is fully charged. (You can choose whether sound or vibration from the settings screen)
2. Charger unplug Alarm:
The app alerts if the charger is unplugged at any time. You need to enter the password to stop the alarm.
(You can choose the password from the settings screen)
If you leave your phone in any place for charging (trains, public rooms, etc.,), Theft alarm can help you very much.
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 8/07/2013 07:12:00 am